Ikhaya elihle elinegumbi lokulala eli-1 ngo-MAS - I-Airbnb
Ikhaya elihle elinegumbi lokulala eli-1 ngo-MAS
Dar es Salaam, Dar es Salam, i-Tanzania
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Mas
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Mas izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Buyela emuva futhi unethezeke kulesi sikhala esizolile, esisesitayeleni esitholakala eMikocheni eduze kwamafulethi ezinkanyezi ezi-5. Kuyimizuzu emi-5 ukuya enxanxatheleni yezitolo ezinkulu e-Dar, Palm Village naseMikocheni Plaza. Izitolo ezinkulu nezinye izinsiza zikubanga nje elifushane ukusuka endaweni.
Iklanyelwe ukubhekelela ukunethezeka kwakho futhi inikeze umuzwa wasekhaya. Indawo yokuhlala inekhishi lepulani elivulekile, igumbi lokuhlala kanye negumbi lokulala elikhulu eline-en-suite.
Indawo yami encane ecwebezelayo iklanyelwe ukubhekelela ukunethezeka kwakho futhi ikunikeze umuzwa wokuba ungekho ekhaya. Inendawo yokulala eyi-1 enkulu ene-en-suite, ikhishi lohlelo oluvulekile, igumbi lokuhlala kanye novulandi omncane emnyango.
4.74 · 23 okushiwo abanye
Indlu itholakala endaweni ephephile ngaphakathi kwendawo enesango. Kuyimizuzu embalwa ukuya enxanxatheleni yezitolo ezinkulu e-Dar es salaam njenge-Palm Village, iShopperz Plaza ne-Mikocheni Plaza kanye ne-Mbalamwezi beach.
Ngitholakala kokubili ocingweni kanye ne-imeyili.
Hlola ezinye izinketho ezise- Dar es Salaam namaphethelo